फ्रान्सिस्को कथा: COVID-19 को समयमा शक्ति
Binh Ngo मा डिसेम्बर 2, 2020 द्वारा लिखित।
फ्रान्सिस्को सधैं जकडिएको छ र आफ्नो परिवारको सुरक्षित र आर्थिक स्थिर राख्न त्यागहरू गरेको छ। COVID-१ the खाडी क्षेत्रमा हिर्काउनु अघि, फ्रान्सिस्को र उनकी श्रीमती बचत गर्न र उनीहरूको ठूलो छुट्टीको योजनालाई यथार्थ बनाउन उत्सुक थिए। फ्रान्सिस्को प्राय: सप्ताहन्त र छुट्टीहरूमा काम गर्ने भएकोले, उनका चार जना साना बच्चाहरू विशेष गरी ओरेगनमा विस्तारित परिवारलाई भेट्न उत्साहित थिए। त्यतिखेर, यो कल्पना गर्न गाह्रो थियो कि उनीहरूको योजना र जीवन कोरोनाभाइरसको कारण कति चाँडो परिवर्तन हुन सक्छ।
“हामीले सोच्यौँ कि यो त्यस्तो चीज हो जुन नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। हामीले सोचेका थिएनौं कि यो यहाँ आउनेछ किनकि यो त्यस्तो टाढाबाट महसुस भएको थियो। तर कहिलेकाँही जीवनले हामीलाई आश्चर्यचकित पार्दछ। राम्रो वा नराम्रो - हामी कहिले पनि जान्दैनौं र के हुन्छ भनेर हामी सँधै तयार हुन सक्दैनौं। ”
जब आश्रय-इन-अर्डर यस वर्षको मार्चमा स्थापित गरिएको थियो, तिनीहरूको विश्वलाई थाँहा छ कि यो विपरित पल्टियो। फ्रान्सिस्कोकी श्रीमतीलाई कामबाट छुट्टियो र स्कूलहरू बन्द भए, जसले आफ्ना बच्चाहरूलाई घर र भित्र बस्न बाध्य तुल्यायो। त्यस पछि उनीहरूको परिवारले स to्घर्ष गर्न थाले। फ्रान्सिस्को र उनकी श्रीमतीले आफु र आफ्ना बच्चाहरूलाई महामारीको बारेमा उनीहरूलाई त्यतिबेला भएको सीमित जानकारीको साथ शिक्षा दिन यथासक्दो गरे। एक स्थानीय शेफको रूपमा, फ्रान्सिस्को एक आवश्यक कामदार मानिन्छ, त्यसैले उनी काम गर्ने र किराना किन्नका लागि घर छोडे।
अप्रिलमा उनको जन्मदिनको केही दिन पछि, फ्रान्सिस्को ज्वरोमा फूट्यो।
ऊ पसिना, थरथर काँपेको थियो र चारै तिर हल्लाउँदै थियो - त्यस्तो ठाउँमा जहाँ ऊ अब हिंड्न, खानाको स्वाद लिन, वा कुरा गर्न समर्थ भएन। उनले गुगलमा आफ्ना लक्षणहरू खोजे र यो निर्धारण गरे कि कहीं र कुनै न कुनै रूपमा उनी COVID-19 मा संक्रमित भएका थिए। उनकी श्रीमतीले पनि केही दिन पछि हल्का लक्षणहरू अनुभव गर्न शुरू गरे। तिनीहरूका बच्चाहरूमा भाइरस फैलाउनबाट जोगिन, उनीहरूको परिवारको भविष्यको डरले उनीहरूले उनीहरूलाई आफ्नो कोठामा बन्द गरे।
"मेरो ज्वरो पहिलो चार दिनमा सबैभन्दा बढी थियो। यो साँच्चै गाह्रो थियो। म र मेरी श्रीमती रोयौं किनभने हामी बच्चाहरूसँग नजिक हुन सकेनौं। म पहिले नै सबैभन्दा नराम्रो सोचिरहेको थिएँ। मेरा बच्चाहरू कसरी व्यवस्थापन गर्न जाँदैछन्? मेरो परिवारलाई के हुन्छ? त्यो मेरो जीवनको चार दिनहरूमध्ये सबैभन्दा खराब थियो। ”
भाग्यवस, फ्रान्सिस्को बिस्तारै राम्रो महसुस गर्न थाले र बेडरेस्ट को हप्ता पछि आफ्नो गतिशीलता पुनः प्राप्त भयो। यद्यपि सबैभन्दा अन्धकार दिनहरू बितिसकेका छन्, फ्रान्सिस्कोले कोरोनाभाइरस र आर्थिक सid्कटको बीचमा आफ्नो परिवारको जीविकाको चिन्ता गरिरहेछन्।
COVID-१ ले यो स्पष्ट रूपमा स्पष्ट गरेको छ कि वित्तीय स्थिरता कमजोर छ - विशेष गरी अमेरिकामा आप्रवासी परिवारहरूको लागि।
फ्रान्सिस्को कडा परिश्रम र लगनशीलताका लागि कुनै अपरिचित होइन। नौ जना बच्चाहरूमध्ये छैठौं हुँदा फ्रान्सिस्कोले १२ वर्षको उमेरमा मेक्सिकोको युकाटनमा आफ्ना परिवारको पालनपोषण गर्न काम गर्न थालिसकेको थियो। समृद्धिको वाचाबाट प्रभावित भएर आफ्ना साना भाइबहिनीहरूलाई शिक्षालाई निरन्तरता दिन चाहने फ्रान्सिस्कोले १ of वर्षको उमेरमा स्कूल छाडेर संयुक्त राज्य अमेरिका बसाल्ने निर्णय गर्यो।
ओरेगन जाने आफ्नो मूल योजना सकिएपछि फ्रान्सिस्को सान फ्रान्सिस्कोमा बसोबास गर्न थाले र उनलाई कोयोट फिर्ता गर्न सहयोग गरे जसले उनलाई सीमा पार गर्न मद्दत गरे। उसले एकचोटि धेरै अनौंठो कामहरू लिए र डिशवाशरबाट एक शेफको लागि आफ्नो बाटोमा काम गर्यो। अब, आफ्नो खाली समय मा, फ्रान्सिस्को आफ्नो परिवार लाई विभिन्न प्रकारका भाँडा माझ्न, आफ्नो श्रीमतीलाई मितिमा बाहिर निकालेर, र आफ्ना चार बच्चाहरू प्रत्येकको साथ एक पटकको गुणवत्तामा बिताउन रमाईलो गर्दछ।
फ्रान्सिस्को उनी विगत २ years बर्षमा आफ्नो परिवारको लागि निर्मित जीवनको लागि भाग्यशाली र गर्व महसुस गर्दछन्। ऊ जहिले पनि सहि काम गर्न र सम्मान र सम्मानका साथ जीवन बिताउन कोसिस गर्दछ। लाखौं अन्य आप्रवासीहरू जस्तै, फ्रान्सिस्कोले कमाएको आयमा करहरू तिर्दछन्। यद्यपि उनको परिवारलाई सबैभन्दा बढी चाहिएको बेलामा संघीय सरकारले उनीहरूको आप्रवास स्थितिको कारणले उनीहरूलाई कारसेस ऐनको महत्वपूर्ण आर्थिक राहतबाट वञ्चित गर्यो।
“हामी सबै मानव छौं र समान व्यवहार गर्नु आवश्यक छ। यो अप्ठ्यारो हो किनकि हामी पनि करहरू तिर्दछौं। यद्यपि हामी यहाँबाट आएका छैनौं, हामी अझै करहरू तिर्दछौं, तर कहिले पनि कुनै चीजका लागि योग्य हुँदैनौं। हामी पनि त्यो सहयोगका लागि योग्य छौं। तर त्यो कुरा के हो भनेर होइन र के गर्न हाम्रो लागि छोडियो तर यो स्वीकार्नुहोस्? हामी अपरिचित छौं। हामी अदृश्य छौं। यो हामी कसरी देख्छौं - हामी अदृश्य छौं। ”
संघर्षको समयमा, फ्रान्सिस्कोले परिवार र समुदायमा सामर्थ्य पायो।
जब संघीय सरकारले उनीहरुलाई पछाडि फर्कायो, फ्रान्सिस्कोले आफ्नो समुदायमा भरोसा राख्यो र समर्थनका लागि प्रियजनहरूलाई। उनका दुई ठूला छोरीहरूले आफ्ना कान्छो भाइबहिनीको हेरचाह गरे जब उहाँ र उनकी श्रीमती बिरामी थिए। उनका कान्छो भाइले उनीहरूको भाँडा तिर्न सहयोग पुर्‍याए। उसको रोजगारदाताले स्वास्थ्य बीमा, खाना, र अन्य संसाधनहरू प्रदान गर्न जारी राखे। फ्रान्सिस्को र उनकी श्रीमतीले सकारात्मक परीक्षण गरेपछि सान फ्रान्सिस्को शहरसमेत उनीहरूले कसरी गरिरहेछन् भनेर सोधपुछ गरे र खाना सहयोग प्रस्ताव गरे।
फ्रान्सिस्कोको बारेमा पहिलो सुने एमएएफ आप्रवासी परिवार कोष उसको छोराको स्कूलबाट। उनी र उनकी श्रीमतीले प्रत्येकलाई आवेदन दिए र संघीय कोरोनाभाइरस राहतबाट वञ्चित आप्रवासीहरूका लागि $500 अनुदान प्राप्त गरे। तिनीहरूले उपयोगिता बिलहरू तिर्न र ढिला क्रेडिट कार्ड भुक्तान गर्न एमएएफको अनुदानहरू प्रयोग गर्थे। जे होस् फ्रान्सिस्को धेरै आपतकालिन राहत कार्यक्रमबाट आफ्नो स्थितिका कारण फाइदा लिन सकेन, उनीले प्राप्त गरेको सबै समर्थनका लागि कृतज्ञ छन्।
“त्यहाँ धेरै चीजहरू छन् जुन तपाईं गर्न सक्नुहुन्न र जब अप्रमाणित भएको बेलामा आवेदन दिन सक्नुहुन्न - विशेष गरी महामारीको बखत। उत्तेजक जाँच प्राप्त गर्न, तपाईंसँग कागजातहरू हुनुपर्दछ। Getण प्राप्त गर्न तपाईलाई सामाजिक सुरक्षा नम्बर चाहिन्छ। म मेरो परिवार हेर्न वा हवाईजहाजमा जानको लागि यात्रा गर्न सक्दिन। हामी बन्द छौं। तर म सरकारबाट सम्मान र समान व्यवहार बाहेक अरू केही चाहन्न। ”
COVID-१ simply को आर्थिक विनाश केवल बढ्तै गर्न सकिदैन। जबकि विश्वव्यापी महामारीको प्रभाव टाढाको छ, ल्याटिनक्स समुदाय अप्रिय कडा स .्कटमा परेको छ। उसले आफैंले कोरोनाभाइरसको अनुभव गरिसकेको हुनाले फ्रान्सिस्को अब आफ्नो समुदायको लागि स्रोत छ र अरुलाई यो अवास्तविक समयमा आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल कसरी राख्ने भनेर सल्लाह दिन्छ।
फ्रान्सिस्कोले यो पनि बुझेको छ कि आर्थिक सुधार एकै रातमा हुने छैन र उसको परिवारले लामो COVID दिनको सापेक्ष स्थिरता महसुस गर्न भन्दा धेरै समय लाग्नेछ। तर उनी अगाडि बढ्ने र यस परिवारबाट परिवारको देखभाल गर्न कटिबद्ध छन्। जे भए पनि, उहाँ सबै कुरा सुनिश्चित गर्नुहुन्छ कि आफ्ना बच्चाहरूलाई उहाँ जस्तो विगतमा संघर्ष गर्नुपर्दैन।
“मलाई धेरै तनाव भएको थियो। म चिन्तित थिए। तर जब मलाई के गर्ने थाहा छैन, म सधैं आफ्ना बच्चाहरूको बारेमा सोच्छु। म तिनीहरूका लागि स्वस्थ हुन चाहन्छु। म उनीहरूको हुर्किएको र उनीहरूले जीवनमा के हासिल गर्न सक्छु भनेर हेर्न चाहन्छु। यही कारणले गर्दा म आज यहाँ उभिन्छु। म उनीहरूको लागि सबैभन्दा राम्रोको काम गरिरहेको छु। ”